Mhanya zvishandiso zveApple ™ pane Linux | Kubva kuLinux
Mhanya zvishandiso zveApple ™ paLinux
eUzama | | Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Hei chikara, dzikama, ndinoziva kuti uchazonyunyuta kuti ichi kana chishandiso hachishande uye kuti haasi ese maapplication anoshanda saka usati wanyunyuta, shanyira izvi list, saka zorora iyo! @ # $% #
Mune ino posvo isu tichataura nezve maitiro ekumhanya, kana kuti ndoda kudonhedza (RAE joke) iyo Android application (kana apk) muLinux. Kune ino posvo pachave nenzira dzakasiyana uye kuitira kuti usapedze nguva uchiverenga, chinonyanya kukosha kutenga nhare (kana nharembozha sezvavanotaura mune imwe nyika yakavandudzwa kupfuura Spain) ine Android kana Cyanogen seni.
Uye ndezvekuti kuve nemaapps muLinux kwakanyanya geek uye kuda kuziva asi pasina manyepo, chinhu chinonyanya kukosha kuadziisa mune echinyakare, ini kushandisa Anwendung ndinonyatsoishandisa mune yangu One Plus One (OnePlus One), asi ku fiddle neichi chidimbu posvo chinouya chinobatsira.
1 Fomu yekutanga: arChon
2 Chechipiri fomu: ARC Welder
3 Bhonasi: VirtualBox + Android x86
Fomu yekutanga: arChon
Uye ndeyekuti iri mushure mekuzvarwa uye Android x86, iyi ndiyo sarudzo yakanakisa sezvo iri iyo inonyatsoteedzera uye ine mamwe anoshanda maapplication.
Kuti tishandise tinoda Google Chrome kana Chromium (yakanyatsojeka browser rusaruraganda, nekuti Firefox ine bvudzi dzvuku, haichagone kutsigira maapplication makuru kana chii?), Sezvo archhon zvinoenderana neizvi.
Kana tava nayo, tinotora pasi iyi peji, inoenderana neChannel yedu, unotoziva kana ichibva kuPikachu kana Charizan :), majee padivi, unofanirwa kusarudza iyo 64-bit dhizaini kana imwe, kana iwe usingazive kuti ndeipi, enda kuRuzivo
Ipapo isu tinoiburitsa kana kuibvisa tobva taenda kuGoogle Chrome (kana kuti Chromium), Sarudzo> Kuwedzeredza uye kumisikidza sarudzo dzekuvandudza uye sarudza iyo isina kuvharwa folda; Mufananidzo wakakosha chiuru chemazwi 😛
Chiziviso chitsvuku chinowanzoitika
Iye zvino isu ticha dhawunirodha imwe app, inova Twerk uye kwete, hapana vasikana vanopisa mu bikini twerking, kunyangwe zvingave zvisina kunaka ... Tichidzokera kuchitumwa, takadzora iyo app (kubva kuGoogle Chrome), kubva pano, uye tinoivhura. Iyi Anwendung inoshandura apk kuita maapps eArChon uye ikozvino uchave uine kusahadzika: Tingawanepi maapk acho? Eya, shamwari dzangu dzinozviwana nekutenda kuApp downloader. "Zvirongwa hazviwanzo kurodha pasi kana kushanda"
Kutora ne apk downloader Isu tinoteedzera chinongedzo cheapp (kubva Google Play) yatinoda uye tinoiisa muinjini yekutsvaga, tinopa Gadzira Chibatanidzo (kana iyo kiyi yekupinda), Dhawunirodha uye utore. Mumuenzaniso wangu ini ndinoshandisa iyo Appy Geek app nguva dzese.
Mushure mekunge tavhura Twerk, tinodhonza iyo apk kuDhonza uye Kudonhedza, tinobaya pane pink pink uye chengeta iyo folda munzvimbo yatinoda.
Ipapo isu tinoenda kune yekuwedzera chikamu, isu tinoona kuti isu tine yekuvandudza sarudzo yakamisikidzwa, uye isu tinoipa kuti itakure iyo isina kuvhurwa yekuwedzera, uye isu tinosarudza dhairekitori ratakasika, mune yangu com.mobilesrepublic.appygeek.
Isu tinopa Kutanga uye voila, isu tatova neapp inoshanda. Yambiro, havasi vese vanoshanda asi iwe une mukana wakanaka wekuti ichashanda.
Uye iwe unotova neako app iri kushanda.
Chechipiri fomu: ARC Welder
Iyi nzira iri nyore kwazvo, nekuti isu tinongofanirwa kurodha pasi apk, tichirangarira kubva APK Downloader, tora iyo Arc Welder application kubva kuChannel App Chitoro (mune iyi batanidzo) uye isu tinovhura iyo Arc Welder app, tinodzvanya Sarudza, tinosarudza panofanira kuchengetwa maapk, ini ndasarudza Desktop, tobva tasarudza apk uye tinobaya Launch app. Sezvo ichigara ichishanda, kana kwete, yakandishandira mashiripiti, zvakare!
Bhonasi: VirtualBox + Android x86
Iko kune bhonasi, uye ndiko kuti iyi ndiyo sarudzo ine kuenderana kwakawanda uye chii, iri Android pachayo asi ndinogona kukuvimbisa dzimwe nguva kuti zviri nani kushandisa Arc Welder kana arChon, pane kushandisa muchina chaiwo (ziso, Ini ndinoti muchina chaiwo, uyo usingashande mushe, asi unoshanda mushe mushe) asi kunyangwe zvakadaro ichiri sarudzo pamwe nemamwe akawanda anowirirana maapplication uye zvine mwero mashandiro (ndinotaura izvi nekuti hazvina kundishandira zvakanaka ) uye zvakanaka kupedzisa chikamu ichi ini ndinokusiira iwe vhidhiyo yekuisa uye kuongorora.
Zvakanaka shamwari, ichi chave chiri chinyorwa chose nhasi, ndinovimba kuti senguva dzose iwe wakada uye wakashanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » Mhanya zvishandiso zveApple ™ paLinux
Chinyorwa chakanakisa uye chakanyatso nyorwa uye chakatsanangurwa, kunyangwe kwandiri, seSpanish, paive nezvakawanda zvamakataura nezveSpain izvo zvandisingabvumirani zvine musoro nazvo. Tinogona kukurukurwa nekushoropodzwa zvinhu zvakawanda asi maererano neshoko remazwi uye girama, mumaonero angu hongu, isu tiri ivo vakanakisa kana vasiri ivo vakanyanya. Kwazisai uye ndinodzokorora makorokoto echinyorwa ichi.
Nenzira, ini ndiri wechiCastilian Spanish uye ndaiwanzotaura nezve dzidzo mune dzidzo, uye kana tichienzanisa matauriro anoita vanhu kuSpain uye ikoko, avhareji nhamba yemazwi akasimba akakwirira muSpain.
Mukusimudzirwa kwemari (kunyange hazvo pasina zvakawanda zviri kuratidzwa mazuva ano) netsika, Spain inokunda maoko
Nenzira, nyika yangu ndeyeSpanish.
Pindura kuna erUzama
Une chokwadi here kuti uri wechiSpanish? Ini handina kunzwisisa kunyange hafu yezvawataura. Chero zvazvingaitika, kuve nemakore gumi nemana ekuberekwa, ndinofunga unofanirwa kusiira iwo marudzi ezvekutaura kana iwe wakura zvishoma. Ndinokutaurira pasina chirevo.
Pindura kune munhu
Mhoro zvakare. Chinangwa changu pandakaita chirevo ichi chaisave chekumutsa kwakadai. Ndinoziva kuti kwaive kuseka kupfuura kwakakomba kunyangwe zvaindinetsa zvishoma. Ini ndaida kutanga ndajekesa kuti ndaifarira nyaya yacho uye kuti ndinoedza kushandisa zvinotsanangurwa pano. Kwazisai uye nekutenda nekugadziriswa kwako.
Nenzira, havazi vese vane iyo dzidzo yawakaratidza kukumbira ruregerero.
Sei ndisingagunun'uni semusikana? Urikuyedza sei kudzora rusununguko rwangu rwekufamba-famba?
Taura padivi, arc-welder inoshanda zvirinani pane imwe yesarudzo mbiri.
Kwete, kungoyambira, kuti iwe usatenderera uchibata shit yangu.
Iwe uri kurudyi rwako asi usanditsika.
Iwe wakarasikirwa neGenimotion
"Kana maseru sezvavanotaura mune imwe nyika yakavandudzwa kupfuura Spain"
Uye anogara mune imwe yenyika dzisati dzagadzirisa izwi anoti ...
Pindura kuna jm
Ini ndiri Spanish Castilian, ndakazvarwa muSpain uye kana uchitaura chokwadi zvandakapusa, asi nharembozha iri nani pane nharembozha, sezvo nharembozha iri zvese zvinofamba, izwi repakati riri nani sechiteshi.
Uye undiregerere zvakanyanya nekuda kwekomendi, sezvo ini ndakakanganisa.
Nharembozha iri mbozhanhare. Ndokunge, inogona kutamiswa kana kutakurika.
Pindura kune fonker
Eugene Diaz akadaro
Uye cellular zvese zvine maseru!
Pindura kuna Eugenio Diaz
Tinogona kutarisisa pane zvemukati meiyo posvo, chikamu chehunyanzvi uye tosiya izvo zvinofungwa nemunyori nezvenyika yake kudivi rimwe, handiti?
Ndatenda! Chidzidzo chakadzidza, ita zvinyorwa zvinotsanangudza, kwete kushoropodza
Ini ndanga ndisiri kunyatso kuzvitaura kwauri. Ndiri kureva kuti hazvina basa kuti iwe unofungei nezve imwe nhaurwa kana asiri iwo musoro wepositi. Izvo zvakakosha apa maitiro ekumhanyisa Android kunyorera paLinux, uye kwete zvaunofunga kana kwete nezveSpain .. uye ndizvo zvandiri kuedza kuudza jm.
Dambudziko harisi iro rinofungwa nemunhu wese nezve chero nhaurwa, dambudziko nderekuti mune ino kesi chero Spanish anopinda muchinyorwa uye anoverenga chirevo anotsamwa. Sezvo zvataurwa izvi zvichiri kuburitswa muchinyorwa uye hazvina kugadziriswa kana kubviswa. Kuita kwemunyori kwekukumbira ruregerero nekuda kwenyaya iyi kwave kwakanaka, chandisinganzwisise ndechekuti ichiri kuburitswa.
Chaizvoizvo makore maviri apfuura ayo anodzokorodza imwe neimwe kana mwedzi miviri ini ndanga ndichitarisa painternet maitiro ekumhanyisa maapplication eUbuntu kuti uone kuti nyaya yaive sei. Chinhu chega chandakawana chaive kuona, iyo emulator inounza iyo SDK uye zvirongwa zve windows uye zvekubhadhara. Kunyangwe ndichiziva androidx2 kwenguva yakareba, maonero andakaverenga akange asiri chinhu kunze kwekusimudzira kusimudzira uye kugadzirisa. Kusvika nguva pfupi yadarika, kunyangwe iyo timu yeakisix86 yakakurudzira kuiisa, iyo yakazviita yaive kunakidzwa neruzivo rwekuyedza. Zvakanaka, kuona kunopfuura kugona kwangu, iyo sdk inoshanda asi inononoka uye nemaapuro akareruka, uye kubhadhara senge kwete. Neazvino Androidx86 kunyangwe hazvo dzidziso zhinji dzichiti iyo Clash of Clan inoshanda handina kuiwana, kunyangwe zvichishamisa kuti Boom Beach yakandishandira.
Ichi chinyorwa chinovhura mikana mitsva kwandiri yeicho chandiri kunyatso kuronga: Kutamba Mashiripiti 2015 uye Chiratidzo cheGosa: Omen, izvo kwandiri zvandisingakwanise kushanda pa androidx86 4.0RC.
Kana mumwe munhu achikwanisa kuita chero cheiri pamusoro basa, kana kana maapps ehukuru hwakadai akavashandira iwo ndapota raira kuti zvinoshanda.
Ndanga ndiri mugadziri weApple kubvira mavhezheni ayo ekutanga uye mazuva ano Genymotion iri, mumaonero angu, ndiyo yakanakisa imwe nzira yekumhanyisa Android kunyorera paGNU / Linux. Inoda VirtualBox asi iri yechokwadi. Iyo vhezheni yekushandisa wega ndeye mahara.
Ndinobvumirana newe. Ndakaisa asi havana kunditeerera. Handizive kuti sei. Genimotion iri, mumaonero angu, yakanyanya kunaka kutevedzera nhasi.
Hongu, ndakuteerera, ndinofunga ndichaita chikamu chechipiri asi kutanga ndaizofanira kuita zvimwe zvinyorwa.
Ndatenda, zvakanaka kwazvo, hauna kuwedzera Genymotion, iyo yemahara yekushandisa wega, uye kushandisa matemplate inoteedzera chaiwo madhijitari muVirtual Bhokisi.
Ini ndakaiisa uye kunyange mimwe mitambo inoshanda mune yakazara skrini kana muhwindo. Kunyangwe asiri ese maapplication anoshanda. Iwe unofanirwa kuenda kunewebhu kuti uise google play - sezviri pachena hazvisi pamutemo kuti iuye isati yaiswa, asi kuiisa - uye inoshanda senge chishamiso.
Kutenda dzidziso! Ini ndauya pano nekuda kweumwe munhu tweet !!!
Pindura kuna Euclid
Gibran Alexis Moreno Zuñiga akadaro
iyo yakanakisa posvo
Pindura kuna Gibrán Alexis Moreno Zuñiga
Ruzivo iwe rwawakaisa muchinyorwa runonakidza kwazvo, asi chirevo pamusoro peSpanish hachizi zvachose.
Ini ndinokuyeuchidza iwe kuti munyika idzo dzaunoti dzakakwira zvakanyanya haugone kudzikisa mota windows kana kusaisa inishuwarenzi nekuti vanokuuraya, haugone kufamba mumugwagwa nekuti vanogona kukuuraya iwe, uku uri kumashure Spain iwe unogona kufamba usina chero mhando yedambudziko mumugwagwa.
Chinhu chimwe kushayikwa kwekuzvitsoropodza uye chimwe chinhu ndechekuti kupusa kwakaomarara kune vakawanda vemunyika iyi nekuva chiSpanish.
Ndatenda kwazvo nedzidziso, ndanga ndichida kuziva kuti ndozviita sei kwenguva yakareba.
Microsoft inokukoka iwe kuzopemberera kuvhurwa kwaDebian Jessie
Dhawunorodha yazvino vhezheni yeWhatsApp neGoogle Drive